February 2016 - iftineducation.com
ninyahow arimahaan ayey ku nacday saaxiibtaa ee iska fiiri af uryahow
aadan21 / February 29, 2016
iftineducation.com – Waxaa Halkaan idinkugu soo gudbineynaa Todobo arimood oo Dunida ugub ku ah Gaar ahaan Wadamada Islaamka balse mudooyinkan dambe lagu arkay Dhalinyaro badan, waxaana la Sheegay in Todobadaas arimood raga Marka ay ku arkaan Dumarka in ay keento in ay Nacaan niyadana ka saartaan. Todobadaas Arimood ayaana ka ah :- 1-LUGAHIISA: nimanka Qaar waxay leyihiin muruqyo aad u waaweyn…
AMISOM maxay hadda oga hadashay xoojinta ciidanka Somaliya?
iftineducation.com – Kullankii ay yeesheen dalalka ciidamada geeyay Soomaaliya waxyaabaha sida aadka ah looga hadlay waxaa ka mid ahaa, wada shaqeynta ciidamada AMISOM gudahooda, tan ay la leeyihiin ciidamada Soomaaliya iyo qeyb kamid ah dhaqaalaha oo laga goostay. Madaxdii ka qeybgashay shirkaasi waxa ay tilmaameen in la taageero xoojinta ciidamada Somaliya iyo in si degdeg ah ay ku helaan diyaarado dagaal…
Mareykanka: Muslimiin Lagu Dilay Gobolka Indiana
iftineducation.com – Booliiska gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa weydiisanaya bulshada inay caawimaad ka geystaan sidii loo ogaan lahaa cidda ka dambeysay dilka laba nin iyo wiil yar oo kasoo jeeda gobolka Sahel ee Africa. Saraakiisha ayaa guri ku yaalla magaalada Fort Wayne ee gobolkaas ka helay meydadka Mohamedtaha Omar oo 23 jir ahaa, Adam Kame Mekki loo 20 jir ahaa…
Axmed Madoobe Oo Madaxda Somalida Ugu Baaqay Inaanan La…
iftineducation.com – Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Maamulka Jubbaland oo maanta dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo, ayaa wuxuu ka waramay waqtiga adag ee dalku uu maraayo. Madaxweynaha oo ka soo muuqday Warbaahinta gudaha, ayaa ka hadlay amni darrada sii baahaysa ee dalka ka jrta, joogitaanka Amisom, gacan bidixeenta Beesha Caalamka iyo isagoo Madaxda Somalida ugu baaqay inay si Somalinimo ah…
NAAGAHA SIIGEESTA ASTAANTA LAGU AQOONSADO -MUUQAAL
iftineducation.com – Ma ogtahay in siigadu tahay jimicsiga guska,?Ma rabtaa in gus weyn aad yeelato 4 qodob ayaa kuu sahlaya akhriso hadda……….. Ragga ayaa inta badan iskugu jira qaar gus yar iyo kuwo gus waaweyn haddaba ma ogtahay guska yarba haddii uu adag yahay inuu naagta qancin karo laakiin waxa jira gus yar oo haddana waxba yahay ah oo aan naagta…
Waligaa Sidaan Ma U Sameeysay Lamaantaada ? Been Ha Sheegin Saaxiboow
iftineducation.com – Baaritaan la sameeyay ayaa sheegaya in qoor galinta ay si weyn u wanaajiso xasuusta iyadoo taasi ay sii dheer tahay in uu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga , wel welka , cabsida, balse waxaa shardi ah in labada dhinac ay qoor gilintaas raali ka yihiin oo midkood dhibsaneyn. Taqaatiirta neerfaha ayaa sheegaya in saameynada wax ku oolka ah ee…
Marka Sariirta La Jooga Farsamadaan Ha Iloobin , Sida Libaax Oo Kale Ayaa Raaxo Darteed Ula Boodeysaa.
iftineducation.com – Ha ka joojin macaantaada iyadoo oo raaxda qaadanaysa ka hor inta aadan qanqaniinin dhegaha qoorta iyo garbaha iyo qeynabaha kale ee jirkeeda . Ha iska dhega marinin in aad u salaaxdo goobaha aad u wada baahan tihiin in aad ka qaadataan dareenka , hana ku ordin kaliya meelaha galmada laga ciyaaro. Hawada saarin miisaankaaga oo dhan lamaanahaaga /taada kolka…
Wax Ka Baro Qaabka aad U Dhaqmeeyso Habeeynka Aqal Galkaaga!!!!!
iftineducation.com – Waxaa laga yabaa inbadan oo anaga nagamid ah aanan aqoon u laheyn mise u baahan in laga jaahilbixiyo habeenka koowaad ee aqal galka waa qodob muhiim ah u ah bulshada in loo ifiyo. Waxaan shaki ku jirin in aanu ninku wax dhibaato jireed ah kala kulmeynin bekra-jebina habeenka aqalgalka, ha yeeshee waxa uu la kulmaa dhibaatooyin nafsiyadeed oo kaga…
HABARWAA: WAXAAN KU RIYOODAA HOOYADAY!!!
aadan21 / February 28, 2016
iftineducation.com – HABARWAA: WAXAAN KU RIYOODAA HOOYADAY!!! waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo 18 jir ah, waxaan marayaa sannadkii ugu danbeeyey waxbarashada dugsiga sare, waxaan caqliyeystay anigoon Hooyo lahayn, waxaan ku garaadsaday guriga aabahay, waxaan is arkay anigoo dhexjooga guri aan la iga rabin, waxba kama ogayn aabahay waxa la igu samayn jiray, waxaan nebcaystay aayaday iyo caruurteeda, dadku waxay dhahaan…
Hilary Clinton oo guulweyn gaartay
iftineducation.com – Hillary Clinton ayaa si weyn kaga adkaatay ninka ay loolamayaan ee, Bernie Sanders, oo ay isku haystaan qofkii doorashada guud ku matali lahaa xisbiga Dimiquraadiga. Guusheedaasi ayaa waxa ay ka gaartay gobolka South Carolina oo codad aad u badan ay ka heshay. Natiijada waxa ay muujineysaa in Mrs Clinton ay si xad dhaaf ah taageero ballaaran uga heshay dadka…